Iqela leBloomwell lifumana inkxaso-mali enkulu yembewu kwezakha zathengiswa kwi-cannabis yaseYurophu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iqela leBloomwell lifumana inkxaso-mali enkulu yembewu kwezakha zathengiswa kwi-cannabis yaseYurophu
Iqela leBloomwell livale ngempumelelo inkxaso-mali yembewu engaphezulu kwe- $ 10 yezigidi zeedola-olona tyalo-mali lwaziwa esidlangalaleni kwinkampani ye-European cannabis ukuza kuthi ga ngoku. Umtyali mali okhokelayo ngumboneleli wokukhula kwemali waseMelika Measure 8 Venture Partner, iingcali kutyalo mali lwecannabis. Phakathi kwabanye abatyali mali, ingelosi yeshishini uGqirha Reinhard Meier utyala imali kwakhona ngengxowa mali yeVenture Capital Investors; kunye noMnu Weber we-FPS wenza njengomcebisi wezomthetho kwiBloomwell.
Iqela leBloomwell livale ngempumelelo inkxaso-mali yembewu engaphezulu kwe- $ 10 yezigidi zeedola-Olona tyalo-mali laziwayo esidlangalaleni kwinkampani ye-cannabis yaseYurophu ukuza kuthi ga ngoku. Utyalomali olukhokelayo ngumboneleli wokukhula kwe-US Measure 8 Venture Partner, iingcali kutyalo mali lwe-cannabis. Phakathi kwabanye abatyali mali, ingelosi yeshishini uGqirha Reinhard Meier utyala imali kwakhona ngengxowa mali yeVenture Capital Investors; kunye noMnu Weber we-FPS wenza njengomcebisi wezomthetho kwiBloomwell.
Ngokuhambelana nesibhengezo, iBloomwell Group, ebandakanya iAlgea Care, inkampani ehamba phambili yezonyango yaseYurophu yonyango lwe-cannabis ngokwamanani ezigulana, iyazibeka njengenkampani ephetheyo, ivumela ukuba yakhe, ityale imali okanye ifumane iinkampani ze-cannabis.
“Nge Bloomwell, siguqula ukhathalelo lwempilo ngokwenza ukuba ikhompuyutha ibe namandla e-cannabis yezonyango namanye amayeza endalo. Iinkampani zethu zephothifoliyo ziya kugxila ngokupheleleyo kwindlela yabathengi ye-centric kulo lonke uluhlu lwexabiso le-cannabis yezonyango, ngaphandle kokulima. Ixesha lamayeza endalo liqala ngoku kwaye uBloomwell uyakhokela, utshilo u-Niklas Kouparanis, u-CEO kunye noMsunguli we-Bloomwell Group.
Kunyaka nje omnye, iBloomwell Group ikhule yaya kubasebenzi abali-160, kunye nemali eqikelelweyo yezigidi ezintlanu zeerandi ngo-2021. Ukongeza ku-Niklas Kouparanis, u-CEO, usomashishini kunye novulindlela we-cannabis, ibhodi yomelezwa ligqala le-telemedicine uGqirha Reinhard Meier, ongumseki ukhokele iTeleclinic ekuphumeni, uMseki-ntsapho uSamuel Menghistu kunye noBoris Jordan, iqabane elisekayo le-Measure 8 Venture Partners.
Ibhodi ephumeleleyo igubungela iinkalo zonyango, ukwenziwa kwedijithali, i-cannabis, utyalomali kunye nokwakha uphawu kumacandelo ohlukeneyo entengiso.
UGqirha Reinhard Meier, UMlawuli weRadiology eWestpfalz Klinikum, eyasekwa ngaphambili kwaye yatyala imali kwiinkampani ezininzi zonyango kunye nokuqalisa iimali ezininzi zeVC.
U-Boris Jordan, Ngokufunyanwa kwe- $ 285M ye-EMMAC, iCuraleaf yeyokuqala kwaye kuphela kwe-MSO yokuba nobukho obunentsingiselo eYurophu. IJordani ithathwa njengenye yeengcali ze-cannabis ezaziwayo eMntla Melika kwaye inoxanduva lokusebenza kweCuraleaf, inkampani ethengisa esidlangalaleni i-cannabis, kunye notyalo mali kwindawo ye-cannabis ngeMilinganiselo ye-8 Ventures.
UNiklas Kouparanis, Usomashishini osisigxina, kunye novulindlela kwishishini le-cannabis yezonyango i-Euopean.
USamuel Menghistu, ekhokele i-intersection ye-banking, i-investments, i-M & A Transaction kunye ne-IPOs ngaphezulu kweminyaka emithandathu.
“Izinto ezininzi ezilindelweyo kubatyali zimali kunye nakwiinkampani zehlabathi kwi-cannabis yaseYurophu azizalisekanga ukusukela oko kwamiselwa 'umthetho weCannabis' ngoMatshi 2017, nangona intengiso iqhubekile nokukhula ngokuthe ngcembe. NgeBloomwell, sibonisile kwisithuba sonyaka nje omnye ukuba ingakanani into enokufikelelwa ngokuhlawulwa kweshishini. Umzi mveliso we-cannabis waseYurophu ogcweleyo unokubakho kuphuhliso lweBloomwell. Ngelixa imarike idibanisa kwenye indawo, yonke imiqondiso ikhomba ekukhuleni nasekukhuliseni ngokudibanisa i-cannabis, ukuvelisa izinto ezintsha, ukwenziwa kwedijithali kunye ne-D2C egqibeleleyo okanye indlela ethe ngqo kwizigulana, utshilo u-Anna-Sophia Kouparanis, uMsunguli weQela leBloomwell.
“IJamani yeyona ntengiso iphambili yaseYurophu ye-cannabis yezonyango kwaye iBloomwell Group ibonakalisile kungaphelanga unyaka ukuba ingachonga kunye nezisombululo ezitsha kule marike yokuhluma intsha ukuze kuxhamle abaguli. I-Cannabis inekamva eliqaqambileyo eYurophu kwaye sijonge phambili ekuxhaseni nasekusebenzeni neQela leBloomwell njengoko beqhubeka nokukhula, utshilo uBoris Jordan, uMlingani oyiNtloko weMilinganiselo ye-8 Venture Partners kunye noSihlalo oLawulayo weCuraleaf.
“Ukwenza ikhompuyutha kwikhompiyutha sisitshixo sokugqibela sokubeka abaguli embindini wenkqubo yezempilo engasebenzi kakuhle. I-Algea Care, inkampani yeepotifoliyo yaseBloomwell, sele ibonakalisile ukuba inobungcali kunye namandla okuphucula intlalo-ntle kunye nobomi bemihla ngemihla bezigulana kwicandelo elilawulwa kakhulu ngonyango lwe-cannabis kunye nedijithali kunye nomgangatho ophezulu kakhulu wenkonzo Utshilo uGqirha Reinhard Meier.